जोरपाटीमा घ’ट्यो ड’रलाग्दो घटना ! युवतीले प्रेम प्रस्ताब नमान्दा बिचराले संसारै त्यागे (हेर्नुस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > जोरपाटीमा घ’ट्यो ड’रलाग्दो घटना ! युवतीले प्रेम प्रस्ताब नमान्दा बिचराले संसारै त्यागे (हेर्नुस् भिडियो)
admin January 20, 2020 भिडियो, समाचार, समाज	0
माघ ०२, काठमाडौँ । काठमाडौँको जोरपाटीमा एक युवाले आ’त्मह’त्या गरेका छन् । रौतहट घर भइ जोरपाटीको दक्षिणढोका नजिकै रहेको एक गलैचा उद्योगमा काम गर्दै आएका टेक बहादुर तामाङले गलैचा कारखानामा रहेको एक फलामको डन्डीमा झु’न्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन् । १८ वर्षीय तामाङले केटीको कारण कारण आ’त्मह’त्या गरेको भन्ने खुलेको छ । केटीले तामाङसँग बिहे गर्न नमानेपछि उनले आ’त्मह’त्याको बाटो रोजेको भन्ने छ ।
उनिसँगै काम गर्ने छिमेकिले बताएका छन् । बिहान ४ बजे समयमा उनी गलैचाको तान डोरीले पा’सो लगाएर झु’न्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन् । उनका छिमेकीका अनुसार मृ’तक तामाङ निकै मिलनसार र असल स्वभावका रहेका थिए । स्थानीय प्रतक्षदर्शीका अनुसार उनले आ’त्मह’त्या गरेको हो या उनको ह’त्या भएको हो भन्नेमा संका लागेको बताएका छन् ।
मृ’तकको आमाबुवाले खबर गरे पश्चात् प्रहरी आएर घ’टनाको बिवरण लिएर गएका छन्। अहिले उनको श’व पो’ष्टमा’र्टमका लागि टिचिङ अस्पताल लागिएको जनाइएको छ। घ’टनाको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर थप अनुसन्धान गरिने प्रहरीले जनाएका छन् । तामाङको अल्पायुमै नि’धन भएपछि अहिले उनको परिवार शोकमा डुबेका छन् । उक्त दु:खद घ’टनाको बारेमा स्थानीयसँगको कुराकानी तलको भिडियोमा राखिएकाे छ ।